Antsary: #8M Ny valo marsa nanerana an’i Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Nizara ny saripikany ny vehivavy avy amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices
Voadika ny 10 Marsa 2020 5:35 GMT
Nanao fihetsiketsehana ho fitandroana ny ainy sy ny zony ny vehivavy manerana ny gilaoby nandritra ny Andro Iraisampirenena ho an'ny vehivavy taona 2020. Nifantoka tamin'ireo diabe tany Amerika Latina, izay nahavory vehivavy an'hetsiny—raha misy manombana fa iray tapitrisa ny mpanao fihetsiketsehana tao Santiago, Shily, fotsiny—ny lohateny nanerana izao tontolo izao. Toherin'ny vehivavy ny famonoana (fandripahana) vehivavy, ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ny tsi-fitoviana (fiangarana) ary naborany ihany koa ny fanohanan-dry zareo ny zo hanala zaza.
Nifantohan'ny vehivavy ao Brezila ny taha avo amin'ny famonoana vehivavy misy ao amin'ny firenena, ny zo hanala zaza, ny zon'ireo te-hiova ho vehivavy, ny fanoherana ny fanorisorenana ara-nofo ary, mazava loatra—ny fanoherana ny filoha Jair Bolsonaro. Nialoha ny nifidianana azy tamin'ny taona 2018, nanao fanoherana ny vehivavy teo ambanin'ny teny tigetra hoe “(fa) tsy izy” (“ele não,” amin'ny teny Paortiogey). Vao haingana i Bolsonaro nanao fanamarihana (manambany vehivavy) hamelezany ilay vehivavy iray mpanora-gazety nahazo loka raha niatrika fanentanana ankarihary (fanaratsiana) avy amin'ny mpanohana io filoha io ravehivavy.
Lasibatry ny mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny 8M ihany koa ny fampihenana (fanesorana) ny politikam-panjakana nanampy ny niharam-boinan'ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ary maro ireo nanome voninahitra nahatsiaro an'i Marielle Franco—vehivavy mainty iray, mpikatroka sy politisiana izay maty nisy namono tamin'ny taona 2018. Hatramin'ny mason'andro androany mbola tsy voavahan'ny manampahefana ny raharaha momba azy [mg].
Tao Santiago renivohitr'i Shily, mihoatra ny iray tapitrisa ny vehivavy nanao diabe an-dalambe tamin'ny 8 marsa.
Vehivavy ao Meksika manohitra ny taha avo amin'ny famonoana vehivavy sy ny filazana ho tsy fihontsonan'ny fanjakana.
Vehivavy vazimba tao Meksika manohitra ihany koa ny herisetra, toy ireto vehivavy Otomi ireto.
Tao Bruxelles, Belzika, naneho ny fanohanany ihany koa ny vehivavy Amerikana Latina. Hoy ny fivakin'ny teny aoriana: “Ho fanohanana ny fitokonam-pirenena avy aty Bruxelles #onedaywithoutus [Andro iray tsy misy anay].” Tamin'ny 9 marsa, nanao fitokonana ihany koa ny vehivavy avy ao Meksika. Hoy ny fivakin'ny sora-baventy amin'ny ankavanana hoe: “Vehivavy iray miady. Miova ny hoavin'ny vehivavy rehetra.”